Izindaba - induku yokuhlonipha:
Isetshenziselwa ukuqeda ukusetshenzwa kokucabanga okujulile, ukuxazulula inkinga yemishini yamakhasimende;
Iyakwazi ukulungisa iqonde ngqo, ithuthukise ukunemba kokwenziwa komsebenzi;
Idizayini ilula futhi kulula ukuyisebenzisa;
Impilo yamathuluzi amade, ingazungezwa kabusha, futhi inciphise kakhulu izindleko zokucubungula zamakhasimende.
Lolu hlobo lwethuluzi lokucija lisetshenziselwa ukucubungula ngokunemba kwezimbobo ezincane. Kusetshenziswa imishini yokuma okuqondile. Kunemishini eminingi yokucija eyenziwe nguNissin eJapan
Umkhiqizo ikakhulukazi uqukethe ikhanda lomzimba (uhlobo oluhlukanisiwe, olwenziwe ngomzimba wekhanda nesibambo sangemuva), i-honing oilstone, i-sliding rod, ulayini wokugoqa, ukubuya kwentwasahlobo nokugcina indandatho. Ngemuva kokuthi umzimba wekhanda uxhunywe nethuluzi lomshini, umshini wokucija ujikeleza uphinde ubuyisele emuva ukushayela umzimba wekhanda nokucija itshe lamafutha. Ngasikhathi sinye, umshini wokucija uphusha induku yokuhambisa ukuze wandise itshe lamafutha we-honing radially. Umsebenzi wokusebenza unqunywa ukuqubuka kwengcindezi okwenziwe ukuxhumana phakathi kwetshe lamafutha le-honing nobuso obuzokwenziwa ngomshini.
Icubungula into nobubanzi bokucubungula
Lolu hlobo lomshini we-honing lusetshenziselwa ukucubungula umbhobho wepompo kawoyela nemboni yamagiye. Imikhiqizo esetshenzisiwe i-plunger negiya. Izinto ziyi-20CrMo ne-GCr15. Izinto zicishiwe futhi zashiswa kanzima, ubulukhuni buyi-hrc60-63, futhi isabelo semishini yimicu engu-2-4 yethuluzi lomshini we-2-axis kanye nezintambo eziyi-6-8 zethuluzi lomshini we-4-axis. Ngaphezu kwalokho, ibuye isetshenziselwe ukucubungula izingxenye ezahlukahlukene zezimboni ezifana negiya lokuqondisa, induku yokuxhuma, ibhlokhi yenjini, umgodi wokubacindezela, izinto zasendlini, ummese nesikhunta, i-generator ejwayelekile, umshini wokuthunga, isithuthuthu njalonjalo.
Ukunemba kobubanzi kungafinyelela ku-0.0025mm, ukuzungeza kungafinyelela ngaphakathi kwe-0.3um, i-cylindricity ingafinyelela ngaphakathi kwe-0.7um, i-roughness ingafinyelela ngaphakathi kwe-ra0.07um, futhi iqonde ingafinyelela ngaphakathi kwe-1.0um.
Isibonelo, ubuchwepheshe bokucubungula i-plunger: i-rough honing (umshini wokunqanda ovundlile) i-nm75 oilstone - i-semi fine honing (ovundlile we-honing machine) nm55 noma i-nm63, usayizi womkhiqizo ngemuva kokucutshungulwa ubekiwe (0.5um level I) - honing fine (vertical honing machine ) 400 # oilstone - honing super fine (vertical honing machine) 800-1000 # oyitshe lamafutha.